NOOCYADA UGU FIICAN EE LO'DA CAANAHA: SHARAXAAD GAABAN - XOOLAHA
Gadashada lo'da caanaha ma aha hawl fudud.
Xaaladdan, waxa ugu wanaagsan in la helo xogta ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan cayayaanka ugu fiican ee lo'da loo sameeyay si gaar ah si ay u helaan caano.
Waa inaad sidoo kale qiimeysaa qiyaasta mid kasta oo ka mid ah noocyada la doortay.
Waxaa ugu fiican in la ogaado waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'breeds' ee shirkadaha beeraha ee degaanka ah, iyo in ay iibsadaan lo'da ee dhabta ah ee la jeexjeexay halkaas.
Sannado badan, liiska dhammaan noocyada lo'da caanaha, noocyo dhowr ah ayaa la soo xulay kuwaas oo si fiican ugu dabooli kara baahida kooxda martida ah ee alaabta caanaha.
Holstein taran ee lo'da
Lo'da Xayawaanka Holstein waxaa lagu dhaliyey Maraykanka iyo Kanada. Ujeedada ugu muhiimsan ee abuurista ee tani waxay ahayd in la helo xayawaan madow iyo caddaan ah oo leh heerar sarreeya oo ah milkay iyo jir xooggan.
Sanadkii 1861, tarbiyad cusub oo lo'da madow iyo caddaan (Holstein holeses) ayaa u muuqday. Laga soo bilaabo 1983, lo'dadani waxay soo iibsadeen magaciisa hadda oo muddo dheer ku jirey wareegga xayawaanka xoolaha.
Inta badan cunnooyinka Holstein oo ku raran madow iyo madow. Intaa waxa dheer, waxaa jira xayawaan leh maqaarka maqaarka casaanka ah.
Miisaanka qaangaar yar ayaa badanaa qiyaastii 650 kg, xayawaanka qaangaarka ah wuxuu culeyskiisu yahay 750 kg. haddii aad "fatten" u qaadato Holstein qiyaas ahaan miisaanka 800-850 kg, ka dibna ka fikir in aad ku guulaysatay inaad kor u qaaddo lo'da. Miisaanka hal dibi wuxuu gaari karaa 1200 kg.
Ha yeelo holsteins candho xoolo ah oo fiican, walxaha caanaha ayaa si wacan u muuqda, musqusha waxaa loo yiraahdaa maaha mid si cad u muuqda sida wakiillada kale ee arrimahan.
Udder laftiisu waa mid gaaban, ballaaran, oo si adag ugu xiran derbiga caloosha. In ka badan 95% lo'aad, candho xoolo ah ayaa qaabeeya qaabka finanka.
Darajada milkayos ee lo'da waxay ku xiran tahay sida ay u kala duwan tahay cimilada gobolka ee xayawaanku ku nool yihiin xilligan.
Kuwa Holstein oo ku nool beeraha jawi diirimaad ah, ayaa waxay siin doonaan in ka badan 10,000 kg, iyo xayawaanka ku jira xayawaanka cimilada dabiiciga ah, waxaa suurtogal ah in aan helin wax ka badan 7,500 kg oo caano ah.
Hase yeeshee, waxaa lagu darayaa xaqiiqda ah in baruurta dufanka loo qaybiyo si xad dhaaf ah, taas oo ah, kiiskii kowaad, caanuhu waxay noqon doonaan wax yar oo dufan ah, iyo kan labaad - oo ku filan.
Marka la gawraco caanahaas lo'da, dhalidda hilibka waxay noqon doontaa ilaa 50 - 55%.
Dibedda Ayrshire ayaa dib loo soo celiyay qarnigii 18aad ee Scotland isagoo ka gudbay Dutch, Alderney, Tiswatera iyo Flemish. Dibedda, lo'dooyinkani waxay sameeyeen kuwo aad u xoog badan, oo leh muuqaal saamigal ah.
Lafdhabarta iyaga ayaa xoog leh, laakiin dhuuban, guluubku waa ballaaran oo qoto dheer. Madaxa waa yar yahay, waxoogaa yar oo wejiga ah. Geeska iftiinka iftiinka weyn ku filan. Qoorta waa gaaban oo dhuuban, daboolay maqaarka yar ee maqaarka.
Isbedelka u dhexeeya garabka iyo madaxa waa siman. Lugaha gaaban, laakiin si sax ah ayuu u shaabadeeyaa. Muruqyada ayaa si fudud loo horumariyaa. Maqaarka qaansarradani waa dhuuban, oo leh timo badan.
Udder bowl-qaabeeya, si fiican u horumarsan, naaso dhexdhexaad ah, isbeddel ah xilliyada ugu wanaagsan. Midabka asalka ah ee lo'dooyinkani waxay ahayd midab casaan ah oo cadaan ah, dabadeedna lo'da ayaa bilaabay inay muuqdaan cadaan leh dhibco yaryar oo casaan ah, ama jirka oo dhan ayaa lagu rinjiyey casaan mugdi ah oo leh meelo cad oo yaryar.
Mawduuca xayawaankani waa mid aad u adag, waxay si fudud u cabsi gelin karaan, waxay sidoo kale awoodaan inay muujiyaan gardarrada. Colds, qaansarradan ayaa si aad u fiican u soo baxa, laakiin xaaladaha kulul waxay noqdaan kuwo gaabis ah.
Miisaanka lo'da ee qaangaarka ah wuxuu noqon karaa 420-500 kg, iyo dibi - 700-800 kg.
Duufaantu way yar yihiin, 25-30 kg mid kasta.
Cows Aurshire sii caano badan. Inta lagu jiro xilliga nuujinta, 4000-5000 kg oo caano ah oo leh walxo baruur oo ah 4-4.3% ayaa laga heli karaa qaali.
Sababtoo ah maaddadan dufanka ku jirta caanaha lo'daas, globules yaryar ayaa la ogaan karaa.
Cuntada hilibka ee caleemaha Ayrshire waxaa lagu qiimeeyaa sidii lagu qanci lahaa. Laga soo bilaabo hal lo'da ku saabsan 50-55% miisaankoodu wuxuu tagi doonaa hilibka.
Caleenta Dutch-ka ah
Lo'da caanaha Holland ayaa loo tixgeliyaa wakiillada ugu caansan ee noocyadaas guud ahaan. Tani waxaa la dhigay bred iyada oo aan la isticmaalin noocyada shisheeye, sidaas hore waa la nadiifiyaa.
Maanta, noocyada kala duwan ee lo'da waxaa lagu koray 33 dal. Cannaanka caanaha ee Holland waa saddex nooc: madow iyo muraayad, casaan iyo jajab iyo Groningen. Kuwa ugu caansan waa xayawaan madow iyo caddaan ah, magaca labaadna waa cawska Frisian.
Wixii 150 sano ah ee taranta this ee lo'da, farsamayaasha xayawaanka ayaa ku guuleystay in ay horumariyaan xayawaanka kuwan marka ay la kulmaan heerarka tayada. Markii hore, lo'dani waxay diiradda saareen hilibka, lagama filayn in ay ku filnaadaan aagga murqaha.
Maanta, lo'dooyinkani ma aha oo kaliya caano badan, laakiin sidoo kale haysato jir wanaagsan.
Lafahooda way xoog badan yihiin, dhabarkooduna waa xitaa, saddexda dambe ee lo'da ee jirka waa mid ballaaran oo toosan, oo ah mid caadi ah ee lo'da Friesian.
Chicks Kuwani waa qaybo hore iyo qaybo dhexe oo jirka ah. Cuncunku wuu weyn yahay, lakabka si siman u kala qaybsan, ibta ayaa si sax ah loogu habeeyaa. Xitaa haddii xaywaankan xoolaha ah oo ay jiraan cillado, muddo dheer oo qalliin ah waxay awoodeen in ay tirtiraan.
Ilaa inta wax soo saarka wax laga qabanayo, in ka badan 4500 kg oo caano ah ayaa laga heli karaa hal lo'da, kaas oo tilmaamayaasha baruurta waxay noqon doontaa ilaa 4%.
Nooc noocaan oo kale ah ayaa si dhakhso ah u koraya, sanadka ugu horeeya ee dibi wuxuu ka heli karaa 300 kg oo miisaanka nool.
Lo'da qaangaar ah ayaa miisaankeedu yahay 500-550 kg, iyo dibi - 800-900 kg.
Duufaantu waxay ku dhasheen meel ballaadhan, 38-40 kg.
Haddii xayawaanku si wanaagsan u daalaan, ka dibna marxaladda gawaarida boqolkiiba hilibka miisaanka guud ee lo'du waxay noqon doontaa 55 - 60%.
Cawska xajinta caanaha waa badi cows, laakiin dadka qaar ayaa loo saari karaa hilibka iyo caanaha lo'da.
Tani waxay heshay magaceeda sababtoo ah midabka dabeecadda ee xayawaanka - midabkiisu waa casaan, midabkuna wuxuu ku kala duwan yahay midabka cagaarka ah ilaa guduud mugdi ah.
Waxaa sidoo kale jiri kara dhibco cad maqaarka, gaar ahaan caloosha ama lugaha. For bulldo, midabka madow ee sternum iyo dhabarku waa dabeecad.
In dhererka, sac ayaa kori karaa ilaa 126-129 cm, haddii la qiyaasay ka soo.
Cawska xajka ah ee caleemaha waa caanaha caanaha oo dhan calaamadaha dibadda. Waxay leeyihiin lafo iftiin ah, jidh dheer, muuqaal ah, madaxa dhexdhexaad ah. Qoorta waa muddo dheer, dhuuban, oo lagu daboolay tiro badan oo maqaarka maqaarka ah.
Gariigtu waa qoto dheer, cidhiidhi ah, gumeysiga ayaa si liidata loo horumariyay. Dareenku waa mid ballaaran, dhexdhexaad ah oo dherer ah, masaariddu waa la yareyn karaa. Miisaanka caloosha waa weyn yahay, laakiin derbiga caloosha ma aha mid sax ah. Lugaha xoog leh oo toosan.
Cunnaba si fiican ayaa loo horumariyaa, qaabkana waa wareegsan, dhexdhexaad ah oo cabbir ah, dhumuc ahaan qaab dhismeedka.
Mararka qaarkood waxaa suurtagal ah in la kulmo lo'da oo aan candhuufka si wanaagsan loo soo saarin, taas oo ah, waxa uu leeyahay qaab aan caadi ahayn, lakabana si aan sinnayn loo horumarin.
Cawska loo yaqaan "steppe" ayaa si sahlan loo isticmaali karaa jawiga cusub, kulaylka u adkaysta, la'aanta qoyaan iyo cunaan cawska oo dhan beerka si ay u socdaan.
Cilladaha dibedda waxaa loo tixgelin karaa addimada aan haboonayn, cirridka dhuuban, iyo sidoo kale dhoobo jajab ah.
Musqulaha lo'da ee noocyada noocan oo kale ah waa kuwo liita, miisaankuna waa yar yahay. Cows in hudheel 3 ama ka badan ayaa miisaankoodu yahay celcelis ahaan 450-510 kg. Bulls-saarayaasha waxay heli karaan 800-900 kg miisaanka jirka.
Dumarka waxay ku dhashaan 30-40 kg iyada oo ku xiran jinsiga.
Waxsoosaarku waa 50-55%.
Celcelis ahaan, dhalidda caanaha ee hal lo'da waxay ka kooban tahay 3500-4000 kg oo caano ah oo leh dufanka 3.7-3.9%.
Lo'da Kholmogory waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee caanaha caanaha. Badanaa waxa lagu rinjiyeynayaa madow iyo midabo kala duwan, laakiin mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa lo'da midab-cas iyo midab cas, midab casaan iyo madow.
Jidhka xayawaankani waa mid qulqulaya, lugaha ayaa dheer, dhabarka iyo loin waa xitaa, masruufku wuxuu noqon karaa 5-6 cm oo ka sarreeya caleemaha, taas oo ku dhawaad ​​aan la qiyaasi karin.
Dareenku waa mid ballaadhan, oo u egtahay. Dib u soo noqosho, si fiican loo horumariyo. Lugaha ayaa si sax ah u yaal., waxay yihiin kuwo si fiican loo go'aamiyo iyo jilicsanaanta. Caloolku waa mid cufan, wareegsan. Sternum si fiican u horumarsan, laakiin ma qoto dheer.
Horumarinta musqulaha sidoo kale waa heer heer sare ah. Maqaarku waa mid cufan, dhexdhexaad ah. Cuncunku waa celcelis, lakabyada ayaa si siman loo soo saaray, ibta ayaa ah cylindrical, dhererka mid ayaa ku kala duwan 6.5 illaa 9 cm.
Madaxa waa yar yahay, wejigana waa ka sarreeyaa. Geeska waa gaaban yahay.
U isticmaali shuruudaha cusub ee lo'daan si dhaqso ah.
Dumarka waxay miisaamaan celcelis ahaan 480-590 kg, oo dibi ah - 850-950 kg.
Cowska ugu weyn wuxuu gaadhay qiyaastii 800 kg, iyo bohol - 1.2 ton.
Hilibka lo'da waa mid tayo leh.
Iyada oo naas nuujin leh oo dhan ka mid ah xayawaanka 55-60% ayaa la siin doonaa hilibka lo'da.
Waxsoosaarka caanuhu wuu sarreeyaa, laga bilaabo lo'da waxaad ka heli kartaa 3600-5000 kg oo caano ah oo leh heerka ugu sarreeya ee dufanka 5%.
Inta lagu jiro nuujinta, lo'da waxay soo saari kartaa in ka badan 10,000 kg oo caano ah.
Caleemaha Yaroslavl ee lo'da waxaa lagu bakhtiiyey qarnigii 19aad ee gobolka Yaroslavl iyadoo ay sabab u tahay taranta. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee ka soo jeeda dalalka CIS.
Midabka qaansarradan waa mid madow, laakiin waxaa jira shakhsiyado madow iyo caan ah iyo casaan iyo casaan. Madaxu waa marwalba caddaan ah, goobo caddaan ah ayaa sidoo kale laga sameeyaa indhaha, indhahana madow. Sidoo kale, caloosha, buraashka daboolka iyo lugaha hoose waa mid cad oo rinji ah.
Qaangaarka qaangaarka ah ee dhererkiisu wuxuu gaadhay 125-127 cm, miisaankeeduna waa 460-500 kg. bullshi waxay miisaankoodu noqon karaa 700-800 kg.
Nooca jirka ee dhagaxyada Yaroslavl caadi ahaan waa mid caan ah, qaababkuna waa mid muuqda. Jirku waa yar yahay, lugaha ayaa hooseeya oo dhuuban.
Xabadku waa qoto dheer laakiin cidhiidhi ah, Dewlap waa la horumariyeysarreeya. Qoorta waa muddo dheer, daboolay lakabyo yar oo maqaarka ah, taas oo ah mid aad u khafiif ah oo dabeecad u ah dhismihiisa.
Dufanka ka hooseeya ee lo'da ayaa la soo saaraa waxoogaa yar. Muruqyada si xun ayaa loo horumariyaa., iyo agagaarka wareegga jirka.
Madaxa lo'da waa qallalan oo cidhiidhi ah, qaybta hore waa mid yar yar, geesaha waa iftiin, laakiin dariiqyadu waa madow.
Dhabarku waa mid dhexdhexaad ah, masaariddu inta badan waxay saqafka u qaabaysan tahay, inta badan dhacdooyinka noocan oo kale ah sida cirridka jidhka ee ku jira tuber-bararka iyo qashin-qubka ayaa caadi ah. Caloosha waa weyn tahay, feeraha ayaa si kala duwan loogu kala saaraa. Cunnuhu waa wareegsan yahay, si fiican ayaa loo horumariyey.
Neefaha hore ayaa si ka ballaaran u ah kuwa ugu dambeeya, taas oo ah muhiima kala duwan ee lo'da Yaroslavl.
Sannad gudahood, hal sac ayaa soo saari kara celcelis ahaan 3500 - 6000 kg oo caano ah oo leh walxo baruurta deggan 4-4.5%. Inta lagu jiro nuujinta koowaad, 2250 kg ayaa laga cabi karaa lo'da.
Hilibka ee lo'da ee kala duwan ee yaroslavl of tayada hufan, soo saarka at la gowraco waxay noqon kartaa 40-45%.
Tagil oo ah lo'da
Lo'da Tagil waa caano lo 'keliya. Way hooseeyaan, dhererka dhererku wuxuu noqon karaa 125-128 cm, massku wuxuu gaari karaa ilaa 450-480 kg.
Dibedda, lo'da way boodaan, maadama jirka uu aad u sarreeyo (153-156 cm). Xabadku waa qoto dheer, qoortuna toos ayuu u dheer yahay, oo leh maqaarka yar ee maqaarka.
Maqaarka laftiisa waa mid cufan oo cufan. Madaxu waa dhexdhexaad, qalalan. Dhinaca dambe ee lo'da waa mid dheer oo cidhiidhi ah. Lafdhabarka waa mid fiican, xoog badan. Cuncunku si fiican ayuu u kobcay, ibta ayaa si sax ah loo dhigay isla markaana waxay leeyihiin dherer raaxo leh.
Maqaarka lo'da Tagil badiyaa waa midab madow iyo midabyo kala duwan, laakiin waxaa jira sidoo kale bunni, casaan, casaan iyo kala duwan, iyo sidoo kale xayawaanka cad iyo madow iyo casaanka.
Hooves, sanka iyo talooyinka geesaha waa madow.
Faa'iidooyinka ka mid ah noocyada this waxaa laga helaa oo kaliya in dibadda, taas oo ah, lo'da waxay yeelan kartaa aad u yar oo lafa-miskeed, si qaldan u dhigo lugaha ama muruqyada liita.
Cowsku wuxuu ku socon doonaa hawada nadiifta ah ee nafta, waxay si fiican u caadaysteen xitaa xaaladaha cimilada ugu xun. Hawlaha taranka ee lo'da waxaa la sameeyaa muddo dheer, ilaa ay ka gudbaan da'da da'doodu u dhaxayso 15-20 sano.
Lo'da tagilku waxay leedahay tayo wanaagsan hilibka. Maalintiiba, gobolladu waxay heleen miisaanka 770 - 850 g, miisaankoodu markuu da 'yar yahay hal sano ka hor waa 400 - 480 kg. Dufanka xayawaanka, hilibka intaa ka badan ayaa la heli karaa. Celcelis ahaan waxaa lagu hayaa 52-57%.
Qaansigan ayaa si fiican u caan baxay - qafas ka mid ah ayaa cabbi kara in ka badan 5000 kg oo caano ah oo leh dufanka 3.8 - 4.2%.
Hadda waxaad haysataa liiska wakiilada ugu qalanta ee lo'da caanaha iyo waxaad si ammaan ah u iibsan kartaa lo'da hore ee qaangaarka ah ama kubir yar oo ku raaxee caano cusub subax kasta.